Etu ị ga-esi tụọ nloghachi na ntinye nke Social Media | Martech Zone
Fraịde, Septemba 19, 2014 Tọzdee, Septemba 18, 2014 Douglas Karr
Anyị atụlewo ihe ịma aka nke enweghị mgbasa ozi mmekọrịta ROI n'oge gara aga - na ụfọdụ mmachi nke ihe ị nwere ike ịlele na kedu mmetụta mgbasa ozi mgbasa ozi na-emetụta nwere ike. Nke ahụ agaghị ekwu ụfọdụ nke mmekorita nke mgbasa ozi enweghi ike tụọ ya na nkenke.
Nke a bụ ihe atụ dị mfe… onye isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ tweets na isiokwu ndị isi echiche, ntuziaka nke ụlọ ọrụ ahụ, na ịja ndị ọrụ mma na ntanetị na-arụ ọrụ dị egwu. A na-agụ ndị tweets na ndị ọrụ, atụmanya, na ndị ahịa. Ka oge na-aga, ndị ọrụ ahụ nwere afọ ojuju na gụrụ akwụkwọ na ntuziaka nke ụlọ ọrụ ahụ, atụmanya na-etolite ntụkwasị obi na onye isi ala ma mechie n'oge na-adịghị anya, ndị ahịa ahụ na-enwe ike ịkwalite ozi ahụ akọrọ iji rụọ ọrụ ka mma ma nweta nsonaazụ kacha mma na ụlọ ọrụ ahụ enyemaka. Kedu ihe bụ laghachi azụmaahịa maka ikere òkè nke CEO na Twitter? Ọ dịghị mfe ịza, ọ bụ?
Iji gosi gị otu ị ga - esi soro nloghachi nke mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta gị ma jiri ihe ọmụma ahụ mee ka ROI gị dịkwuo elu, emeela m ozi ederede nke na - agbagha usoro ịkwesịrị ịme iji nweta ihe mgbaru ọsọ ndị a. Neil Patel, QuickSprout
Neil na-enye usoro pụrụ iche nke na-atụ mmetụta ziri ezi nke mbọ mgbasa ozi mgbasa ozi gị na-arụ:
Debe gị mgbanwe mgbaru ọsọ
Kenye uru ego na ntụgharị ọ bụla
Tụọ ngụkọta uru site na ọwa
Kpebisie ike na mkpokọta akwụ ụgwọ
Tụlee arụpụta ma melite.
Enwere obere ihe na atụmatụ a yana na ọ na-emetụta ego a na-akwụ ụgwọ maka mbọ mana ọ naghị ekwe ka mgbanwe na-agbanwe na ntinye ego. Ọ bụrụ n ’ị tụọ ROI a n’ọnwa izizi iji igwe na-elekọta mmadụ, a na-agba mbọ ahụ mana nloghachi nwere ike ịbụ $ 0. Tinye otu ọnwa a na-agbasi mbọ ike karịa ọnwa ma na-eto eto ndị na-ege gị ntị, nke na-ada ụda ma gbasaa iru gị ga-eme ka nloghachi gị dịkwuo elu. Dị ka akaụntụ ezumike nka nwere ihe na-arịwanye elu, yabụ mee mgbalị gị na mgbasa ozi mmekọrịta!
Tags: uru mwepu egoatụ roitụọ social media roineil patelpasent laghachiriquicksproutlaghachi azụmaahịalaghachi na ntinye aka na mgbasa oziROIusoro roielekọta mmadụ na-erite uruusoro mgbasa ozi mgbasa ozielekọta mmadụ na-akwụ ụgwọSocial Media Marketingmgbasa ozi mgbasa ozi na-alaghachi na ntinye egomgbasa ozi mgbasa ozi na-alaghachi na ntinye egosocial media roi usoro